Adaoro (antokon-kintana) - Wikipedia
Ny Adaoro na Ombilahy dia antokon-kintan'ny zodiaka izay andalovan'ny masoandro amin'ny 14 Mey hatramin'ny 22 Jona. Ny antokon-kintan'ny Alahamady no eo andrefany fa ny an'ny Adizaoza kosa no eo antsinanany.
Ny antokon-kintana Adaoro na Ombilahy
Avy amin'ny anaran'antokon-kintan'ny zodiaka amin'ny teny arabo hoe اثور / Ath-Thur na Ath-Thaur ("ombilahy") ny hoe Adaoro. Amin'ny teny latina sy anglisy dia atao hoe Taurus io antokon-kintana io fa amin'ny teny frantsay dia atao hoe Taureau izy. Atao hoe Ταύρος / Tauros izy amin'ny teny grika. Amin'ny teny soahily izy dia atao hoe Ng'ombe fa amin'ny teny maley kosa dia Lembu Jantan na Kerbau Jantan.
Ny evan'ny zodiaka mitovy anarana aminy, izay ampiasaina amin'ny fanandroana mahazatra ny Tandrefana, dia andalovan'ny masoandro amin'ny 20 Avrily hatramin'ny 21 Mey ka tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ara-kaikintana intsony ny fanandroana amin'ny evan'ny zodiaka noho izany.
Adaoro (evan'ny zodiaka)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaoro_(antokon-kintana)&oldid=970692"
Dernière modification le 9 Mey 2019, à 08:46
Voaova farany tamin'ny 9 Mey 2019 amin'ny 08:46 ity pejy ity.